Archive du 20170124
Rivo Rakotovao Mamita-bahoaka
Mampikaikaika vahoaka, indrindra fa ny tantsaha mpamokatra amin�ny Faritra maro ny tsy fisian�ny orana eto amintsika amin�izao fotoana izao.
TIM Boriborintany faha-VI Manohana ny firotsahan-kofidian�i Dada
Manomana ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ireo antoko politika mivonona amin�ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika. Samy manana ny paikadiny izy ireo amin�izany.
Dinika ho amin�ny fanavotam-pirenena Miantso fiaraha-mitantana
Hitondra fanavotana sa fandetehana ny firenena ny fahatongavan�ny filoham-pirenena tiorka eto ?
fikambanana Ambalambahoaka Manohana ny fanovana governemanta
Mandeha be ny feo ankehitriny fa hotanterahina amin�ny faran�ny volana janoary ho avy izao raha ela indrindra ny fanovana ireo mpikambana eo anivon�ny governemanta.
Taratasin�i Jean Zatra !
Manakory i Jean ! Tsy fanambaniana anao rangahy fa tsy maintsy holazaiko ity zavatra ity a ! Mirefarefa amin�ny tany ny toetranao. Ary raha toa anao daholo ny mpiray tanindrazana rehetra dia ho eto foana ihany isika no horaisina eto.
Fanalam-baraka anaty facebook Tezitra ny zandarimariam-pirenena
Taitra ny teo anivon�ny zandarimariam-pirenena ary manomboka masiaka manoloana ny endrika tsy fanarahan-dal�na miseho any anaty tambajotram-pifandraisana ara-tsosialy amin�izao fotoana izao.
Sinoa sy ny Karana Gaboraraka ny fidirany eto Madagasikara
Efa tena tsy voafehy intsony ny fidiran�ny teratany vahiny eto Madagasikara. Nanaitra ny rehetra, indrindra fa ny tompon�andraikitra mahefa eto amin�ny firenena tamin�ny alalan�ny fandefasana hafatra tao anatin�ny tambajotra ara-tsosialy fesiboky ny mpandraharaha Ny Rado Rafalimanana omaly 23 janoary.
Autoroute RN2 Hatomboka amin�ny faran�ny taona 2017
Lalam-pirenena 8.000 amin�ny 10.000 km no voakojakoja tamin�ny taona 2016 noho ny tsy fahampian�ny bolongambola.
Talen�ny Jirama Mahajanga Namaly bontana an�ny depiote Nin�
Nitondra valin-kafatra mikasika ny fanakianan�ny depiote Mapar voafidy tao Mahajanga I, Rahantanirina Lalao na i Nina momba ny fitantanana ny volan�ny Jirama Mahajanga ny talem-paritra Rabevahoaka Bruno.
Sinoa mpitrandraka vato eny Ambohimalaza Velon'ahiahy ny mponina
Velom-panahiana ny amin�ny fisian�ireo sinoa mpitrandraka vato amina kariera iray eny an-toerana ireo mponina ao anatin�ny kaominina Ambohimalaza.
Bizina rano 1.000 Ar ny iray bidon eny Ambohidroa
Mangidy ny fitadiavana rano eny amin�ny kaominina Ambohibao Antehiroka sy ny manodidina.
Madagasikara sy Vatican Feno 50 taona ny fifandraisana
Ny 27 ka hatramin�ny 31 janoary 2017 izao no hankalazaina eto amintsika ny faha-50 taonan�ny fifandraisana diplomatika eo amin�ny fiketrahana masina ao Vatikan sy ny firenentsika. Io no anton�ny fandalovan�ny sekreteran-panjakana ao Vatikan,
Mirehareha amin�ny tsisy antony!
Mirehareha fatratra ny fanjakana ankehitriny fa mahazo avara-patana amin�ny vondrona iraisam-pirenena. Notanterahina teto amintsika ny fivoriana iraisam-pirenena isan-tsokajiny saingy nitondra inona ho an�ny firenena izany ? Nandalo teto ny sekretera jeneralin�ny firenena mikambana, nandalo teto ny filoha Frantsay,